Mifaly Ny Rosiana Noho Ny Fibatan’ilay Mpanao Hatsikana Tsy Manana Traikefa Politika Ny Fandresana Ny Fihodinana Voalohany Tamin’ny Fifidianana Ho Filoham-Pirenena Okrainiana · Global Voices teny Malagasy
Fandresen'i Zelensky, midika demaokrasia salama tsara hoy ireo Rosiana mpankafy
Voadika ny 31 Mey 2019 12:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, русский, українська, Español, srpski, English
Volodymyr Zelensky (fahefatra avy eo ankavanana), ilay nandrombaka tamin'ny fomba tsy nampoizina ny fifidianana ho filoham-pirenena Okrainiana, niakatra an-tsehatra niaraka tamin'ny Distrika 95, fikambanana mpanao hatsikana amin'ny fahitalavitra niarahany nanorina ny taona 2003. Sary avy amin'i Vadim Chuprina, CC 4.0
Ny 31 Martsa, nanatontosa ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ireo Okrainiana. Ity no fotoana fahafito hisafidianan'izy ireo ny ho filoham-pireneny hatramin'ny taona 1991 nahazoany ny fahaleovantenany tamin'ny Firaisana Sovietika – ary ny faharoa hatramin'ny nisian'ilay lazaina hoe Revolution of Dignity na ny Revolisionan'ny Fahamendrehana nanonganana ny filoha Viktor Yanukovich ary nifidianana an'i Petro Poroshenko tamin'ny fizoran'ny firenena ho amina ady efa nananontanona miaraka amin'i Rosia momba ireo faritra mitaky fizakantena ao Okraina Atsinanana.
Nanomboka tamin'izay no nidina be ny lazan'i Poroshenko,izay nanantena ny mbola ho voafidy tamin'ity taona ity, saingy tsy nisy kandida nahavory olona maro hahasolo azy — afatsy tokana.
Nandresy tamin'ny fihodinana voalohany, nahazo ny 30 isan-jaton'ny vaton'ireo mpifidy, vato 13 teo alohan'i Poroshenko i Volodymyr Zelensky, mpanao hatsikana, iraika amby efapolo taona, izay ny filalaovana ny toeran'ny mpilalao fototra tamin'ny filalaovana ilay andian-tsarimihetsika mitantara mpampianatra iray lasa filoham-pirenena tsy nahy no hany traikefa politika ananany. Tsy nisy toy izany ny hadisoam-panantenan'ireo Okrainiana mpifidy ireo kandidà mahazatra – 39 ny isan'izy ireo.
Felaka manakoako teny an-tavan'ny kilasy politika Okrainiana iray manontolo io fiakaran'i Volodymyr Zelensky io https://t.co/sVlPaKyqhy
Nisarika ny sain'ny Rosia, firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, ny fifidianana filoham-pirenena tao Okraina, niaraka tamin'ny ezak'ireo televizionam-panjakana —izay tena tsy miraharaha an'i Okraina taorian'ny raharaha Maïdan –handoko ny sarinà korontana sy saritaka:
— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 31 марта 2019 г
Ny fandrakofam-baovaon'ny fanjakana Rosiana mikasika ny fifidianana tao Okraina : mihazakazaka miasa any Polonina ireo Okraniana noho ny hamafin'ny fiainana ao, ka tany ry zareo no niara-nirohotra nifidy. Jereo, ry Rosiana, ny zavatra entin'ny fitroaram-bahoaka! pic.twitter.com/dXSwlLgeeD
Na izany aza, noho ny antony maro samihafa dia samy naneho ny firaisam-pony tamin'i Zelensky avokoa na ireo televiziona mpomba ny Kremlin na ireo Rosiana mpanohitra. Maro no nanipika fa tena mendri-piderana sy fitsiriritana ny zava-misy miavaka tahaka ny an'i Zelensky izay toa lasa fandrahonana goavana ho an'ireo mpanao politika ao amin'ny firenena tahaka an'i Rosia, izay tsy ahafahan'ny mpandrotsa-bato hanana safidy maro amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena.
Ny fahitana fa mety ho very toerana ny filoha amperinasa no manaporofo ny fisian'ny demokrasia madio. Mitranga koa izany indraindray na any Afrika aza, fa ho antsika, mijanona ho hafahafa izany.
Nizarazara be ihany ny hevitra tanaty fahan'ny Twitter-ko : Nilaza ny Okrainiana fa lasa adala ny firenena ary voafatotra amin'izao nifidianany mpanao hatsikana izao, mpilalao tantara an-tsehatra tsy matihanina, hanoloana ilay olon-dehibe sy efa ampy traikefa, raha mihevitra kosa ny Rosiana fa mahafinaritra ny nahafahan'i Okraina nifidy mpanao hatsikana, mpilalao tantara an-tsehatra tsy matihanina na koa saribakolin'olona iray ho solon'ilay mpiasa birao sangany efa zokinjokiny.
Tsy azoko mihitsy hoe nahoana i Poroshenko sy ny hafa no mankahala ny asan'i Zelensky amin'ny maha mpanao hatsikana an-dapihazo azy. Manana namana maro mpikambana tao amin'ny KVN aho [fampisehoana vazivazy Rosiana efa tamin'ny taona 1961]. Olona manana ny maha izy azy avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Mahay lavitra noho ny ankamaroan'ireo Rosiana mpanao politika.
Ny hafa kosa nifantoka tamin'ny fihavian'i Zelensky, tamin'ny filazàna fa ny fananana filoha jiosy dia mety ho fandalàna fivoarana be loatra, na ho an'i Etazonia aza :
Tsy miombom-pihetseham-po amin'i Zelensky mihitsy aho, fa mahafinaritra ny fifidianana jiosy a anatina firenena iray Sovietika taloha manana taham-pankahalana jiosy avo dia avo
Tsara ny manamarika fa na i Etazonia aza tsy mbola nanana filoha tsy mpino
Na izany aza, raha jerena ny fifandraisana mahamay eo amin'i Okraina sy Rosia — araka ny fantatra, miady ny firenena roa tonta, na dia tsy voambara ofisialy aza — tsy azo ekena ho an'ny mpanao politika Okrainiana iray izay mitandro ny toerany ny haneho ny firaisampony amin'i Rosia. Tsy hadinon'ireo Rosiana mpanohana an'i Zelensky izany
Androany no andro farany azo hilazana zavatra mahafinaritra momba an'i Zelensky. Manomboka amin'ny Alatsinainy, tsy maintsy hiseho ho henjana eo anoloan'i Rosia izy. Koa dia mpankafy be an'ity mpilalao sarimihetsika ity aho izao! Ary mbola hanohana azy hatrany aho androany, miaraka amin'ny fialantsiny ho an'ilay hany Okrainiana mpanjohy ahy izay hifidy an'i Poroshenko.
Niaraka tamin'izany, nikarakara famoahana valim-pifidianana mivantana tamin'ny fahitalavitra nandritra ny androm-pifidianana i Olga Skabeyeva sy Evgeny Popov, mpanentana ilay fandaharana “60 Minutes” ao amin'ny fahitalavitra Rosiana, izay nanohana ny firotsahan'i Zelensky teny an-tserasera sy ny nitehaka ny fitarihany teny amin'ireo biraom-pifidianana
#Skabeyeva sy ny vadiny – samy olomangan'ny #Russian #agitprop – izay efa miaina sahady ny fankalazana, nanoratra hoe Зе! teo amin'ny kafe iray kaopy, nanome ny valim-pifidianana vonjimaika ka #tymoshenko tsy ao anatin'ny lisitry ny 3 voalohany, Voalaza fa nahazo fahatelo Boyko #UkraineElections pic.twitter.com/ycb1fMIqbv
Izany no nahatonga ireo mpanaramaso sy ireo kandida, hatramin'ireo mpifanandrina amin'i Zelensky tamin'ny fihodinana faharoa hisaina fa i Zelensky no tena tian'i Rosia satria izy malemy :
Mazava fa manao izay handokoana an'i Zelenskiy ho safidin'i Rosia i Poroshenko.
“Nakaton'ireo Okrainianadient tamin'ny fiodinana voalohany ny resaka Rosiana; Fantatro fa hanao izany koa izy ireo amin'ny faharoa.”#UkraineElections #UkraineElections2019 pic.twitter.com/U4LgPNHHA8
Tsy nitsitsy teny mihitsy anefa i Zelensky, rehefa nanontaniana mikasika ny politikany momba an'i Rosia.
Q : Inona no ho lazainao an'i Poutine rehefa mifanena aminy ianao ?
Ze: Angaha moa izahay efa nihaona ? Rehefa mihaona aminy aho, fisaorana no atolotra ho azy noho ny namerenany ny faritanintsika. #ukraineelections #ukraineelection2019 pic.twitter.com/RHu666HHRQ
Na izany aza, tsy manana tol-kevitra politika marim-pototra ankoatr'izay i Zelensky, ary ankehitriny izy hiatrika ilay mpanao politika Petro Poroshenko izay efa za-draharaha, fa tsy ekipana kandida hafahafa natao tsentsin-davaka fotsiny. Hatreto aloha, mbola tsy mazava tsara ho, amin'ny fihodinana faharoa izay hatao ny 2 Aprily, iza amin'izy ireo no hofidian'ireo Rosiana mpankafy.